सेवा « Clickmandu
डेढ अर्बको लगानीमा कागज उद्योग स्थापना हुँदैः दैनिक
महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरमा १ अर्ब ५० पचास करोड रुपैयाँको लगानीमा कागज उद्योग स्थापना हुने भएको छ । जसको आज शिलन्यास गरिएको छ । आइएमई समूहका अध्यक्ष तथा
मोबाइल आयात हालसम्मकै उच्च, ८ वर्षमा साढे १ खर्ब बढीको आयात
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हालसम्मकै उच्च मोबाइल सेट आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत वर्षमा १०३ प्रतिशतले मोबाइल सेट आयातमा वृद्धि भएको हो ।
एनबी ग्रुपमा दाजु-भाईबीच सम्पत्ति विवादः लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर अदालत जाने स्थितिमा
काठमाडौं । सँधैजसो विवादमा पर्दै आएको एनबी ग्रुपको परिवारका सदस्यहरुबीच नै विवाद भएको छ । सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषयमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जितबहादुर श्रेष्ठबीच विवाद भएको हो । विवादको मध्यस्तता गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दै उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेका श्रेष्ठ
फुडमाण्डुमा इसेवामार्फत् भुक्तानी गर्दा ३०० रुपैयाँसम्म छुट पाइने
काठमाडौं । अनलाइन फुड डेलिभरी प्लेटफर्म फुडमाण्डू र नेपालको अग्रणी मोबाइल वालेट इसेवाबीच सहकार्य भएको छ । आफ्नो क्षेत्रका नेतृत्वदायी कम्पनीहरुबीचको यस समझदारीसँगै फुडमाण्डूका प्रयोगकर्ताहरुले मोबाइलवालेट इसेवामार्फत अर्डरमा भुक्तानी गर्न
व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालको नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा करिब ४४ प्रतिशत सेयर किनेर डा. सुनिल शर्मा मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा भित्रने भएका छन् । डा. शर्माले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको ४४ प्रतिशत सेयर प्रतिकित्ता ५००
काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा चेम्वरका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यद्धारा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा समक्ष भेटवार्ता गरेको छ । उक्त अवसरमा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गणतन्त्र
सूचना प्रविधिले दिएको सफलताः अनलाइन फूड डेलिभरी गर्ने जोमाटोको पूँजीकरण भारु १० खर्ब